Kooxaha ka ciyaara Premier League oo qaar ka mid ah xiddigahooda u diidaya inay u ciyaaraan xulalkooda kulammada soo socda ee qarramada & Maamulka horyaalka oo sharraxay sababta ka dambeysa – Gool FM
(England) 25 Agoosto 2021. Kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League ayaa ka hor istaagaya inay xulalkooda u ciyaaraan xiddigaha kasoo jeeda dalalka ku jira diiwaanka gaduudan ee dowladda Ingiriiska kuwaasoo si ba’an uu halakeynayo xanuunka Korona Fayras.
Dowladda UK ayaa u jadwaleysay inay muddo 10 cishe ah karaantiil galayaan xiddigaha dalalkaas kasoo jeeda marka ay kasoo laabtaan gudashada waajibaadkooda qaran ee ciyaaraha soo socda taasoo sameyneysa inay diyaar u noqdaan kulammada xiga ee horyaalka maadaama maalmana ay keli u xareysan yihiin maalmaha kalena ay jir ahaan isu diyaarinayaan.
“Kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League ayaa si diidmo ay ku jirto balse aanan cidna lagu colaadineyn u go’aansaday inaysan ciyaartoyda u fasixin inay ciyaaraan kulammada qarammada ee ka dhacay dalalka ku jira diiwaanka gaduudan ee dowladda Ingiriiska” ayuu maamulka Premier League ku sheegay bayaan uu soo saaray.
Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in go’aanka kooxaha horyaalka Ingiriiska ka ciyaara oo uu taageerayo maamulka Premier League qaban doono illaa 60 ciyaaryahan oo ka kala tirsan 19 naadi oo ciyaara EPL kuwaasoo u safri lahaa bisha September 26 dal oo uu Ingiriiska feejignaan la xiriirta Korona kaga jiro.
Haatan, dadka kasoo jeeda dalalka Argentina, Brazil, Ecuador, Mexico, Uruguay, Colombia, Chile iyo Venezuela ayaa waxaa waajib kun ah inay galaan karaantiil marka ay kusoo laabtaan UK, sidaas darteed, xiddigaha kasoo jeeda Koonfurta Ameerika iyo Bartamaha Ameerika ee ciyaaraya is reeb-reebka Koobka Adduunka ee Qatar ka dhacaya 2022 ayuu sameyn doonaa go’aanka kooxaha Premier League ka ciyaara.
Xiddigaha reer Brazil ee kala ah Alisson, Ederson, Fabinho, Thiago Silva, Fred, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison iyo Raphinha, kuwa kasoo jeeda Argentina ee Emi Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso iyo Emi Buendia iyo kuwa ka tirsan xulka Uruguay ee Edinson Cavani iyo Lucas Torreira ayaa dhammaantood looga yeeray xulalkooda, se kooxahooda ayaa diidaya inay u safraan dalalkooda si ay u matalaan xulalka ay u ciyaaraan.